Kubuyiselwe igumbi lokulala eli-4 ikhaya elinomlilo
Cudgee, Victoria, Australia
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguEmily
Ibuyiselwe ngothando ikhaya le-1916 kwindawo enoxolo yelizwe. Amagumbi okulala amane, amagumbi okuphumla amabini, indawo yokuhlala eyongezelelweyo kunye nomgangatho omkhulu ojonge indawo entle yasemaphandleni.
Ikhitshi labapheki, igumbi lokuhlambela elinesisa (kunye ne-en-suite), kunye negumbi lokuphumla elinikezelwe kubantwana! Zininzi iincwadi kunye nemidlalo yebhodi, kwaye kukho izinto zokudlala zabantu abancinci.
Dibana nehashe labahlali, iikati, iinkukhu kunye neentlanzi zasetropiki. Amaqanda amatsha asimahla anikezelweyo ekufikeni kwawo.
Abanini bahlala kwindawo yokuhlala eyahlukileyo kwipropathi.
Le yindlu ehlaziywe ngokupheleleyo eneminyaka eyi-100+ kumbindi welali yaseCudgee. Yayikade iyivenkile yedolophu kwaye, ngaphambi koko, yayiyindawo ye-pub yedolophu kuphela! Ngoku yindlu enamagumbi amane abuyiselwe ngononophelo, elungele iiholide zosapho, iiholide zamantombazana ngeempelaveki, kunye neendibano zosapho kunye nezihlobo.
Ipropathi ijikelezwe kwicala elinye ngumlambo iCudgee kwaye iyonwabela iimbono ezithandekayo zasemaphandleni. Kukho umgangatho onesisa onendawo yokudlela yangaphandle kunye ne-BBQ kunye negumbi elininzi lokuba abantwana babaleke bejikeleza ngaphandle. Nceda uqaphele ukuba, ngelixa ipropati ibiyelwe ukusuka endleleni, akukho lucingo phakathi kwepropati kunye nomlambo (nangona ukufikelela kuncinci).
Ikhitshi inesisa, ibekwe kakuhle kwaye yenzelwe iindibano zosapho. Iingcango eziphindwe kabini zivula ukusuka ekhitshini / kwindawo yokutyela ukuya kumgangatho.
Kukho igumbi lokuphumla labantwana phambi kwendlu kunye nokhetho lweeDVD kunye nezinto zokudlala.
Sifumaneka kwimizuzu emi-5 ukusuka kwiFreckled Duck Cafe eAllansford kunye nemizuzu eli-15 ukusuka kumbindi weWarrnambool.
5.0 ·Izimvo eziyi-9
Umbuki zindwendwe ngu- Emily
Hi, I'm Emily and I am usually travelling with my partner and child. We have travelled through Airbnb for years and have enjoyed meeting new people and exploring new places around the world!